Tetiandrom-pampianarana :: Fandaminana manaraka ny momba ny fanadinana fifindrana kilasy • AoRaha
Tetiandrom-pampianarana Fandaminana manaraka ny momba ny fanadinana fifindrana kilasy
Miato hatrany ny fiverenan’ireo mpianatra amin’ny kilasy antenantenany any an-tsekoly, ao anatin’izao hamehana arapahasalamana mandritra ny dimy ambin’ny folo andro izao indray. Milaza ny hametraka ny lamina momba ny fanadinana fifindrana kilasy ry zareo ao amin’ny minisiteran’ny Fanabeazampirenena, fampianarana ara-teknika sy araka asa (Menetp), ankoatra ny fanamafisana ny tenin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, fa tsy maintsy hisy ireo fanadinana amin’ity taompianarana 2019-2020 ity.
Nambaran’ny loharanom-baovao avy ao amin’ny Menetp fa: « efa nozaraina boky entina mampiana-tena aloha ny mpianatra amin’ny ambaratonga faharoa fototra (CEG) ary ho avy ny an’ireo kilasy hafa. Arakaraka ny daty hapetraky ny fitondram-panjakana amin’ny fiverenan’ny mpianatra an-tsekoly kosa no handaminana ny fanadinana fifindrana kilasy ».
Manana ny paik’ady manokana indray ireo sekoly tsy miankina, amin’ny alalan’ny fakàna lesona sy enti-mody ary famerenana asan’ny mpianatra any an-tsekoly. Nisy amin’ireo sekoly sasany aza no fantatra fa efa nahavita ny fanadinana fifindrana kilasy. Eo ihany koa ireo efa manomboka miditra amin’ny fisoratana anarana amin’ny taom-pianarana 2020-2021.
Lomano – 50m rano mitsilany :: Fahafolo aty Afrika Rasolonjatovo Michael